I-Cold Creek Cabin, LLC
ICold Creek Cabin, LLC iyikhabethe elihlanzekile, elinefenisha ephelele enezitezi ezimbili etholakala cishe ngamamayela ayi-11 eningizimu ye-Ennis, kanye nemizuzu emihlanu nje ukusuka eMadison River eVarney Bridge. Itholakala kumahektha angama-40 amahle, ikhabethe libheke iMadison Valley ngokubukwa okumangazayo kweMadison Range.
Ikhabethe lilala 8-10 elinamakamelo okulala angu-2 phezulu, ngalinye linombhede wendlovukazi, igumbi lokungcebeleka eliphansi elinombhede wogodo ohlanganisa amawele nombhede ogcwele, kanye negumbi lesine elinamawele angu-2.
Kujatshulelwa ubumfihlo obuningi kule ndawo engamahektare angama-40, nokho kuseduze ngokwanele edolobheni ukuze uthole izinsiza e-Ennis. Indlu ifakwe kahle kakhulu inekhishi eliphelele, iwasha / isomisi kanye namalineni anikeziwe. Jabulela idekhi enkulu yokugoqa futhi ukhululeke ukusebenzisa i-gas grill.
I-Cold Creek Cabin ingamakhilomitha angu-11 eningizimu ye-Ennis endaweni evamile ye-The Ennis Fish Hatchery kanye nemizuzu ukuya e-Varney Bridge.
Izivakashi zingase zisishayele noma zisithumelele imiyalezo uma kukhona imibuzo.